Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Portuguese Diogo Jota Child Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Echiche Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye aha ya bụ "Jota".
Anyị Diogo Jota Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na -ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ nwere nnukwu onyinye na anya maka ebumnuche. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na -atụle Diogo Jota's Biography nke na -atọ ụtọ nke ukwuu. Ugbu a n'atụghị egwu, ka anyị bido.
Diogo Jota Biographymụaka akụkọ Gbasara Eziokwu - Ndụ Mbido:
Malite, aha ya bụ Diogo José Teixeira da Silva. “Jota”Bụ“aha otutu“. Diogo Jota dị ka a na-akpọkarị ya mụrụ na 4th ụbọchị nke December 1996 na nne ya, Isabel Silva na nna, Joaquim Silva na Massarelos, Porto, Portugal.
Diogo Jota toro na nwanne ya André Silva na mahadum obodo Massarelos, Portugal. Andre Silva nke dị n'okpuru ebe a na-agbaso nzọụkwụ football dịka nwanne ya nwoke okenye.
Obodo Jota bụ Massarelos bụ ụka dị iche iche nke Mahadum Porto na-achịkwa. Ọ bụ n'ụlọ ọtụtụ ụlọ ahịa na-eme enyi na-amụrụ akwụkwọ enyi, mmanya mmanya na ọkachamara wannabes.
N'ịbụ ndị nwere mpako, ndị nne na nna na-ahụ n'anya football na ndị na-akwado ya mere ka ọ bụrụ ihe okike ka etinyere egwuregwu ahụ mara mma n'ime nwata Diogo Jota.
Dị ka ọtụtụ ndị na -eto eto na -agba egwuregwu, Jota nwere oge dị ukwuu iji soro ndị enyi gwuo egwuregwu asọmpi. N'oge ụfọdụ, ọ bụghị maka ịgba bọọlụ kama ịmalite ọrụ.
Eziokwu Biography Diogo Jota - Ndụ Ndụ Mbụ:
Ọchịchọ Jota nwere maka football hụrụ ya mgbe ọ dị afọ 9 na -edebanye aha ya na oke ọkpa nke Gondomar, obere klọb dị na mpaghara FC Porto. N'oge na -adịghị anya ọ nwere mmasị na klọb ahụ.
Jota gbagoro n'ọkwá ngwa ngwa ka ọ na -eme nke ọma megide ndị egwuregwu tọrọ ya.
N'ime afọ 2013, Jota weere nzọụkwụ ọzọ na mmepe ọrụ ya. Ọ kwagara Paços de Ferreira, ụlọ ọrụ nwere aha maka mmepe ndị na-eto eto. Ahapụghị Jota obi ụtọ ka ọrụ ntorobịa ya na-eto.
Onye njikwa U17 nke Jota bụ Ruben Carvalho ghọtara na ọ bụ onye pụrụ iche n'oge ahụ, Diogo Jota sonyeere ndị otu ya.
"E nwere otu ngwụsị izu ebe anyị na - akpọ Candal ugboro abụọ," Carvalho gwara SAPO Desporto. “Diogo malitere egwuregwu ahụ wee butere anyị ihe mgbaru ọsọ atọ.
N'echi ya, ọ bịara dị ka onye nnọchi anya ọkara nke abụọ wee gbata abụọ ọzọ. N'ime ntakịrị ihe karịrị otu narị nkeji. "
Omume Jota manyere Ruben Carvalho ka o mee ka ọ ghọọ onye ọkachamara ya.
Diogo Jota Biography - Ụzọ ama ama akụkọ:
Ọzọkwa, Jota nwere mmetụta dị ngwa na mmalite nke ọkachamara ya. Nke a kara akara oge oge ntorobịa ya bidoro. Ugbu a, ka anyị gwa gị ụfọdụ n'ime ndị a.
Ị maara?… Jota ghọrọ onye egwuregwu bọọlụ kacha nta ka ọ nwee akara na egwuregwu Primeira Liga maka Paços de Ferreira.
Ọ ghọkwara onye na -eto eto iji gbata ihe mgbaru ọsọ abụọ n'otu egwuregwu maka klọb ọ bụla na Portugal kemgbe Cristiano Ronaldo. Karịsịa na oge 2015-16, Jota gbara ihe mgbaru ọsọ 14 wee gbakwunye enyemaka 10 na asọmpi niile.
Nke a mere ka ọ bụrụ onye ọkpụkpọ mbụ rutere ihe mgbaru ọsọ 12 n'otu oge n'oge ọ dị afọ 19. N'agbanyeghị nke ahụ, dị ka onye dị afọ 19, a họpụtara Jota ka ọ bụrụ onye na-eto eto kacha mma na elu ụgbọ elu Portuguese.
N'agbanyeghị mmasị sitere na nnukwu klọb Portugal, Diogo Jota mechara kwaga Spain. Ọ bịanyere aka na Atletico Madrid onye kama igwu egwu kpebiri kpebiri ibughachi ya na Portugal iji sonyere FC Porto na mbinye ego otu afọ. Ọ bụ na Porto ka ọ zutere Ruben Nevez ha abụọ wee bụrụ ezigbo enyi.
Ị maara?… Mgbe ọ nọ na Porto, Diogo Jota kụrụ ihe ọzọ dị ịrịba ama site n'ịgba ihe mgbaru ọsọ Champions League mbụ ya na mbibi 5-0 nke Leicester City.
Na ihe mgbaru ọsọ na -abịa ụbọchị ole na ole ka ụbọchị ọmụmụ 20th gasịrị, ọ ghọrọ onye ọkpụkpọ Portuguese kacha nta ka ọ banye na uwe elu FC Porto.
Diogo Jota Biography - Bilie na-ewu ewu Akụkọ nke:
Diogo Jota mgbe o tinyechara otutu oge iji chee echiche kpebiri iso onye agbata obi Porto compatriot Ruben Neves na-ewere "n'ihe ize ndụ"Nke isonyere wolves nke n'oge ahụ bụ ụlọ ọrụ nke abụọ nke Bekee.
Ndị Ezinyere Ezinụlọ, Somefọdụ Fans Enweghi Mmasị…
Onye nnọchi anya ya bụ Jorge Mendes bụ onye nyere ikike ka ọ gbuo ihe egwu ahụ kpọtụrụ ezinụlọ Diogo Jota.
Ọ bụ ezie na ndị na -akwado Porto iwe iwe welitere nku anya nke hụrụ atụmanya ha na -ekpo ọkụ na -ahapụ nnukwu klọb n'ala nna ha wee banye maka klọb nkewa Bekee nke abụọ.
"Na Portugal, ọtụtụ ndị amaghị m ịkwaga," Jota kwuru wee gaa n'ihu. "Ọ bụghị naanị m ma Neves nakwa, ma anyị nọ ebe a ugbu a na ndị kwuru ihe na-adịghị mma ghọtara ugbu a. Naanị ndị ezinụlọ m na mmadụ ole na ole kwadoro m ma ghọta ọnọdụ m. ”
Otu mkpali maka njem ahụ bụ Nuno. Otaga Jota na Wolves dabara n'oge nna ya ukwu Nuno Espirito Santo nwetara ọrụ iji jikwaa Wolves.
Ogologo oge gafere na nna ukwu dị mkpirikpi Ruben Neves na otu nnukwu ndị na-asụ Portuguese dị n'okpuru ebe a na - enyere Diogo Jota aka ma gbanwee ya na ịkụ football na 'Project Nuno'.
“Mgbe ụfọdụ mgbe ịchọrọ ịme ihe, ị ga -etinye ihe egwu. Na n'oge ahụ ọ bụ ihe kacha mma ime.
Anyị bịara ebe a, anyị hụrụ ọrụ klọb ahụ, anyị hụrụ ndị egwuregwu ha zụtara, yabụ anyị tinyere uche anyị na Championship, lekwasịrị anya na (ịbịarute) Premier League wee rụọ ọrụ anyị. " Jota kwuru.
Diogo Jota bụ nchịkọta nke kpakpando Portuguese ndị meriri n'ọgụ ahụ wee nweta ha Premier League nkwalite. O weere ihe mgbaru ọsọ 17 na oge ahụ na-amị mkpụrụ.
Mgbe ọ na -egwu egwu na Premier League, Diogo Jota egosila ụwa na ọ bụ nkwa mara mma na -esote nke ọgbọ Portuguese na -eto eto nke ndị isi Portuguese.
Dị ka n'oge edere, Jota ka ghọrọ onye ọkpụkpọ Wolves mbụ n'akụkọ ihe mere eme iji nweta akara okpu PremierLeague.
Nke a dị egwu na-eme ka ya dị ka onye na-esote ndị Portuguese na-esote ya iji tọọ ihe mgbagwoju anya na nchịkọta egwuregwu mbụ Cristiano Ronaldo. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Banyere Rute Cardoso - Nwunye Diogo Jota:
Ọnye na-bụ Diogo Jota's Girlfriend?
N'okpuru nwoke ukwu ọ bụla, enwere nwanyị, yabụ okwu a na-aga. N'azụ Diogo Jota na-aga nke ọma, enwere egwu na-adọrọ adọrọ na onye Rute Cardoso nke ya na nwoke ya sere n'okpuru.
Ma Jota na Rute bụ ma eleghị anya obi ụmụntakịrị ndị jikọtara ọnụ kemgbe ọtụtụ afọ. O doro anya na Rute anọwo n'azụ nwoke ya kemgbe ụbọchị enweghị obi abụọ banyere ikike ọ ga-enwe ihe ịga nke ọma na Wolves.
Ndị enyi abụọ ahụ amaliteghị ibi naanị ha na obodo Wolverhampton. Ha nwere nkịta ha Luna bi na ha ma na-echekwa ndụ ha na-atọ ụtọ.
Dị ka Sokka si kwuo ya, enweghị iguzosi ike n'ihe fọdụrụ n'egwuregwu ọgbara ọhụrụ, mana nke ahụ ebughị n'uche mmekọrịta dị n'etiti ndị egwuregwu bọọlụ na nkịta.
Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị ịmara na Jota nyere akara ngosi mmeri ya nye Luna ọ hụrụ n'anya onye ọ na-ewerekwa dị ka onye mmeri.
Diogo Jota Ndụ Nke Onwe:
Ịmata Diogo Jota ndụ onwe gị ga - enyere gị aka ịchọta ụdị onye ọ bụla na njiri egwu. N'ụzọ na-akpali mmasị, ma Jota ma Neves aghọwo ndị buddies na-enweghị ike ịgụta ọnụ site na pitch.
O kwere omume na onye na-achọ Jota nwere ike ịchọta ya na enyi ya Aromas de Portugal ihe oriri nke dị na Wolverhampton. Iri nri Portuguese na-eme ka ya na ezigbo enyi ya pụọ ​​n'ụlọ.
Mgbe ha anaghị azụ ọzụzụ, ndị egwuregwu Portuguese abụọ ahụ na-akpọrọ ibe ha bọọlụ tennis ma ọ bụ egwuregwu mgbatị. Ndị a bụ egwuregwu ndị ọzọ agbakwunyere na ahia ha (Nchekwa akụkọ).
Neves na Jota na-egwu egwuregwu na mgbatị ahụ. Ebe E Si Nweta Guardian.
Diogo Jota Eziokwu Eziokwu:
Banyere Super Agent- Jorge Mendes:
"Jorgie Mendes dị ka aka nri m," Jota na-ekwu. “Ọ dị m ka onweghị onye dị mma karịa ya ijikwa ọrụ m, yabụ enweghị m ihe m ga - eche - naanị ka m rụọ ọrụ m na ubi. Yu ga-ahụ oke ọchịchọ mgbe ị gwara ya okwu. Ọ na-agwa m 'ị nwere ike ime karịa. Mendes nwere obi ike ma kwere na m dịka m si eme onwe m ”
Na-ahọrọ aha aha:
Ezinụlọ Diogo Jota yiri ka hà gosipụtara okwu ngosi nke “Jota”Dị ka aha ya na azụ uwe elu ya. Eziokwu bụ, Jota so na ndị na - agba ụkwụ ole na ole na - eme ya.
N'ime ezinụlọ ya, aha ya bụ Diogo na-emeso ya. Njikọ Njikọ nke England na-amachibido aha aha ahụ “Jota”Dị ka iwu megidere na ekwesighi itinye ya n'uwe elu ya.
Diogo ga -eji aha nna ya nke iwu kwadoro. Ọ gbanwere ya ka ọ bụrụ "Diogo J”Mgbe ọ rịgoro na Premier League.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Diogo Jota Ụmụaka akụkọ ya na akụkọ na-abụghị eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.